အသိဉာဏ် Sonic Electroni ...
ကလေးများနှင့်ချစ်စရာ Ultr ...
အီလက်ထရောနစ်လက်အခမဲ့ Ultras ...
Ultrasonic အသိဉာဏ်အော်တို ...
Smart5mode များလူကြီး Sonic Electric Toothbrush EA310
Accoustic တုန်ခါမှုသန့်ရှင်းသောနည်းပညာ - Sonic သွားတိုက်တံ ၃၁၀၀၀ ထိ - သန့်ရှင်းပြီးကျန်းမာသောသွားများကိုခံစားပါ၊ အသံဆူညံမှုလျှော့ချပြီးသေသေချာချာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ၁၄ ရက်အတွင်းမှာသင်၏ပါးစပ်ကျန်းမာမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေပါ။
2020 အသစ်ရောက်ရှိလာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sonic Electric သွားတိုက်တံ EA312
ပစ္စည်း ABS, PC ပါဝါရင်းမြစ် DC 5V, USB အားသွင်းသည့်ဘက်ထရီအမျိုးအစား DC 3.7V, 800mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီ Watterproof IPX7 ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား 2528 * 255mm Net Weight 90g
အသိဉာဏ် Sonic အီလက်ထရောနစ်အစားထိုးဘက်စုံသုံး Mini ကိုလျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ Timer နှင့်သတိပေးချက် EA132
ကုန်ပစ္စည်းပြသခြင်း: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ - ပစ္စည်း ABS ပါဝါအရင်းအမြစ် 2W, USB အားသွင်းစက်ဘက်ထရီအမျိုးအစား DC 3.7V, 500mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီ Watterproof IPX7 ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား 20 * 20 * 215mm Net Weight 56g အသွင်အပြင်: 1.Magnetic Levitation Motor ။ ၂။ အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး Dupont Nylon 612 bristle ။ ၃.၂ function mode (သန့်ရှင်း၊ အဖြူရောင်) ၄.၂ မိနစ် timer နှင့် ၃၀ စက္ကန့်ကြားကာလအချိန်သတိပေးချက် ၅။ ၆ နာရီအားသွင်းပြီးနောက် ၆.၃၀ ရက်ဘတ္ထရီအားလည်ပတ်ချိန် ၂၂၀၀၀ ထိ။ ၇။ ကိုယ်ပိုင်စနစ်ဖြင့်ထူးခြားသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဒီဇိုင်း၊
Soft Bristle ED710 ရှိသောကလေးများအတွက်ချစ်စရာကောင်းသည့် Ultrasonic လျှပ်စစ်ကလေးကလေးသွားတိုက်တံ
ကုန်ပစ္စည်းပြသခြင်း: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ - ပစ္စည်း ABS ပါဝါအရင်းအမြစ် 2W၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်သည့်အားသွင်းဘက်ထရီအမျိုးအစား DC 3.7V, 500mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီ Watterproof IPX7 ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား ၂၅ * ၂၀ * ၁၈၀ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် ၆၉ ဂရမ်။ 1.Magnetic Levitation Motor ။ ၂။ အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး Dupont Nylon 612 bristle ။ ၃.၂ function mode (သန့်ရှင်း၊ အဖြူရောင်) ၄.၂ မိနစ် timer နှင့်စက္ကန့် ၃၀ ကြားကာလအချိန်သတိပေးချက် ၅. နာရီ ၆ နာရီအားသွင်းပြီးနောက် ၆.၃၀ ရက်ဘက်ထရီအားကုန်သွားသည့်အခါ ၁၈.၀၀၀ လေဖြတ် / မိနစ်။ ၇။ ပျော့ပျောင်းသော silicone brush ခေါင်းနှင့်အတူ ...
ကုန်ပစ္စည်းပြသခြင်း: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ - ပစ္စည်း ABS၊ PC စွမ်းအင်ရင်းမြစ် DC 5V၊ အားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 5W ဘက်ထရီအမျိုးအစား DC 3.7V, 1400mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီ Watterproof IPX7 ရေတိုင်ကီ 300ml ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား ၈၅ * ၇၂ * ၂၁၈ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် ၂၄၅ ဂ Feature: 1. ဖိအားအတိုင်းအတာ: 30-120psi 2. Silent design: ၁၇ 17 မှစက်အထိ 30Db ထက်နည်းသောဆူညံသံ။ သွားများကိုသန့်ရှင်းစေရန် ၃.၃ Modes (Normal, Soft, Pulse) ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၄။ ရေပူသွေးချိန် - ၁၄၀၀ မှ ၁၈၀၀ အချိန် / မိနစ် ၅.၇၅ ကြိမ်အားသွင်းနိုင်ပြီး ၄-၅ နာရီကြာသည်။ 6.Uniqu ...
Square Travel သွားတိုက်တံဖြစ်ရပ်မှန် CHS001
Acoustic တုန်ခါမှုသန့်ရှင်းသောနည်းပညာ - Sonic သွားတိုက်တံသည်တစ်မိနစ်လျှင် ၃၁၀၀၀ ထိ / တစ်မိနစ်ခန့်တွင်သာမန်သွားတိုက်တံထက် ၁၅၀% ပိုသောပြားများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Sonic သွားတိုက်တံသည်သွားဖုံးကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။